Suggested for u – See More…
Category: Suggested for u
June 15, 2022 Anonymous
ပုဂံဗိုလ်ချို လို့ ဆိုလိုက်ရင် နယ်ချဲ့တော်လှန်ရေး သမိုင်းမှာ နာမည်ကြီးသူ တစ်ယောက်ဖြစ်တာ အားလုံးသိပြီးသားပါ။ အင်္ဂလိပ်တို့ကို ဒုက္ခအပေးဆုံး ၊ ပထမဆုံးနယ်ချဲ့တော်လှန်ရေး လုပ်ပြီး နောက်ဆုံးမှ အဖမ်းခံရတဲ့ ဗိုလ်ချိုဖြစ်ပါတယ်။ ညောင်ဦးမြို့နယ် ငသရောက်ဆယ်ရွာသား တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။ -တကယ်တော့ ဗိုလ်ချို ဟာ သူ့ရဲ့ဖခင် ဦးရွေဘော်ကဲ့သို့ တိုင်းရင်းဆေးဆရာ
မြန်မာနိုင်ငံထဲ Starlink ဂြိုလ်တုအင်တာနက်ဝန်ဆောင်မှု ဖြန့်ချိဖို့ စီစဉ်နေ…622
June 14, 2022 Anonymous
သူဌေးကြီး အီလွန်မတ်စ်ပိုင် Starlink ဂြိုလ်တုအခြေပြု အင်တာနက်ဝန်ဆောင်မှုဟာ လာမယ့်နှစ်ကစပြီး မြန်မာအပါအဝင် အရှေ့တောင်အာရှဈေးကွက်ထဲ ဝင်ရောက်ဖို့ စီစဉ်နေတယ်လို့ သတင်းထွက်နေပါတယ်။ SpaceX အာကာသကုမ္ပဏီရဲ့ Starlink ဂြိုလ်တုအင်တာနက်ဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ မေလကုန်ပိုင်းကပဲ ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ တယ်လီကွန်းဆက်သွယ်ရေးဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းရဲ့ ခွင့်ပြုချရထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဖိလစ်ပိုင်ဟာ အရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံတွေထဲမှာ Starlink
နာမည်ကျော် အပန်းဖြေစခန်းကို ညစ်ညမ်းရုပ်ရှင် ရိုက်ကွင်းလုပ်ခဲ့တဲ့ Thai Only Fans စုံတွဲအား ရဲတပ်ဖွဲ့ရှာဖွေနေ…622
နာမည်ကျော် အပန်းဖြေစခန်းကို ညစ်ညမ်းရုပ်ရှင် ရိုက်ကွင်းလုပ်ခဲ့တဲ့ Thai Only Fans စုံတွဲအား ရဲတပ်ဖွဲ့ရှာဖွေနေ ဝမ် နမ် ခီယို ရဲ့ နာမည်ကြီး အားလပ်ရက်အပန်းဖြေစခန်းကို ညစ်ညမ်းရုပ်ရှင် ရိုက်ကူးဖို့ ရိုက်ကွင်း အဖြစ် ပြောင်းလဲအသုံးပြုခဲ့တာကြောင့် Thai Only Fans စုံတွဲကို ရဲတပ်ဖွဲ့က
အလုပ်လုပ်မယ့်သူတွေအနေနဲ့ ဘွဲ့လက်မှတ် မလိုဘူးဆိုတဲ့ ကမ္ဘာ့တန်ဖိုးအမြင့်ဆုံး ကုမ္ပဏီများ..622
June 13, 2022 Anonymous
အလုပ်လုပ်မယ့်သူတွေအနေနဲ့ ဘွဲ့လက်မှတ် မလိုဘူးဆိုတဲ့ ကမ္ဘာ့တန်ဖိုးအမြင့်ဆုံး ကုမ္ပဏီများ.. ကမ္ဘာတန်ဖိုးအမြင့်ဆုံး ကုမ္ပဏီ ဖြစ်တဲ့ Tesla မှာ အလုပ်လုပ်မယ့်သူတွေအနေနဲ့ ဘွဲ့လက်မှတ်တွေ မလိုအပ်ဘူး လို့ ပိုင်ရှင် Elon Musk ကပြောပါတယ်။ အလားတူပဲ Apple တို့ Google တို့ နဲ့ Netflix
လူေတြနဲ႔ေဝးရာမွာေနထိုင္ခဲ့ရာမွ ဒုတိယကမာၻစစ္ျဖစ္တာကိုပင္ မသိတဲ့ မိသားစုတစ္စု..622
Unicode ဆိုက်ဘေးရီးယားဆိုတာ ကမ္ဘာပေါ်မှာ လူနေအကျဲအပါးဆုံး ပြည်နယ်ဖြစ်ပါတယ်။ ရုရှားက ပိုင်ဆိုင်တာပါ။ လူနေကျဲပါးရခြင်းရဲ့ အဓိကအချက်ကတော့ ရာသီဥတုက (၁၂)ရာသီမပြတ် ရေခဲတွေနှင်းတွေနဲ့ ဖုံးလွှမ်းနေလို့ လုပ်ကိုင်စိုက်ပျိုး စားသောက်ဖို့ ခက်ခဲတာရယ်၊ တစ်နှစ် ပျမ်းမျှအပူချိန်က ရေခဲမှတ်အောက် (-၂၅)ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်သာရှိပါတယ် (၁) မိသားစုကို လူသူတွေနဲ့ဝေးရာ ခေါ်ဆောင်လာသည့် အိမ်ထောင်ဦးစီး
ျမန္မာျပည္မွာ ‌ယေန႔တိုင္ ရွိေနဆဲ ေလာဘကို အေရာင္းအဝယ္လုပ္တဲ့ လိမ္နည္းတမ်ိဳး…622
မြန်မာပြည်မှာ ‌ယနေ့တိုင် ရှိနေဆဲ လောဘကို အရောင်းအဝယ်လုပ်တဲ့ လိမ်နည်းတမျိုး မျောက်ကုန်သည် ဥပမာ.. တရံရောအခါက ရွာတစ်ရွာတွင် လူတစ်ယောက်ရောက်လာပြီး မျောက်တစ်ကောင် ငွေ (၅၀၀၀) နှင့် ဝယ်မည်ဟု ကြေငြာသည်။ ရွာသားများလည်း မျောက်ပေါသည့်နယ်ဖြစ်သဖြင့် တောထဲသွားပြီး မျောက်ဖမ်းကြသည်။ ထိုလူလည်း မျောက်ကောင်ရေ ထောင်ချီပြီး တစ်ကောင်
မိခင်နဲ့ အဖွားဖြစ်သူမှ သန်းတွေ ကျွေးတာကြောင့် သေ.ဆုံးခဲ့ရတဲ့ ၉ နှစ်အရွယ် မိန်းကလေးငယ်..622
မတ်လ ၂၂ ရက်နေ့တုန်းက အသက် ၉ နှစ်အရွယ် မိန်းကလေးငယ်တစ်ဦးဟာ ဦးခေါင်းမှ သန်းတွေ အကျွေးခံရပြီး သေဆုံးခဲ့ရတာကြောင့် ဒီသေဆုံးမှုရဲ့ အဓိကတာဝန်ရှိသူတွေဖြစ်တဲ့ ကလေးငယ်ရဲ့ မိခင်နဲ့ အဖွားဖြစ်သူကို လူသတ်မှုဖြင့် တရားစွဲဆိုထားပါတယ်။ မိခင်ဖြစ်သူက အသက် ၃၈ နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ Sandra Kraykovich ဆိုတဲ့
ထိုင်းနိုင်ငံမှာ အသုံးပြုခွင့်ရထားတဲ့ ဆေးခြောက်ဥပဒေမှာ ဘာအချက်တွေပါလဲ ?..622
(Unicode) ထိုင်းနိုင်ငံမှာ အသုံးပြုခွင့်ရထားတဲ့ ဆေးခြောက်ဥပဒေမှာ ဘာအချက်တွေပါလဲ ? – အပင်ကို နေအိမ်မှာ တစ်ကိုယ်ရည်စာအတွက် စိုက်ပျိုးနိုင်ပါတယ်။ စီးပွားဖြစ် စိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ အစိုးရဆီမှာ ခွင့်ပြုချက်ရယူရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ခွင့်ပြုချက်မရှိပဲ စီးပွားဖြစ်စိုက်ပျိုးပါက ထောင်ဒဏ်(၃)နှစ် သော်လည်းကောင်း ဒဏ်ငွေ ဘတ် ၃သန်း သော်လည်းကောင်း ကျခံရမှာဖြစ်ပါတယ်။ –
ျမန္မာစာ ဘာေၾကာင့္ အေရးႀကီးတာလဲ…622
ျမန္မာစာ ဘာေၾကာင့္အေရးႀကီးတာလဲ…? ❗️❗️ ကၽြန္ေတာ္တို့ေတြ ျမန္မာစာကို ေန႔တိုင္းေရးေနၾကတယ္၊ ေျပာဆို သုံးႏွုန္းေနၾကတယ္။ ဒါေပမယ့္ အမွတ္တမဲ့ေၾကာင့္ပဲ ျဖစ္ျဖစ္၊ အမွတ္မွားသြားလို့ပဲ ျဖစ္ျဖစ္၊ အမွားအမွန္ မကြဲျပားတာေၾကာင့္ပဲျဖစ္ျဖစ္ အသံထြက္ေတြ၊ စာလုံးေပါင္း သတ္ပုံေတြ၊ သဒၵါအသုံးအႏွုန္းေတြ၊ စာလုံးအထားအသိုေတြ ကြဲလြဲမွားယြင္းေနတာေတြ ျဖစ္တတ္ပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို့ အေနနဲ႔ ကိုယ့္ရဲ့
ျမန္မာ့ဆင္ဖိုနီ (သို့မဟုတ္) အလကၤာေက်ာ္စြာ ဆရာ ၿမိဳ့မၿငိမ္း…622
လူးဝစ္ ပက္စ္ခ်ာဆိုသူက “အခြင့္အေရးဆိုတာ ျပင္ဆင္ထားမွရတယ္” လို့ဆိုဖူးတယ္။ ဒါေၾကာင့္ မေတာ္တဆ ေတြ႕ရွိတယ္လို့ ေျပာေပမယ့္ ေနာက္ကြယ္မွာ စိုက္ထုတ္ထားရတဲ့ အင္အားေတြ၊ ရင္းႏွီးမွုေတြ အမ်ားႀကီး ရွိေနတတ္ပါတယ္။ သိပၸံပညာရွင္ေတြ မေတာ္တဆေတြ႕ရွိတယ္ဆိုတာလည္း လုပ္ေဆာင္ေနရင္းက တိုက္ဆိုင္ၿပီးေတြ႕တာေတြရွိေပမယ့္ အဲဒီတိုက္ဆိုင္မွုေတြဟာ ျပင္ဆင္ထားလို့ရတဲ့ အခြင့္အေရးမ်ိဳးသာ ျဖစ္ပါတယ္။ Penicillin ပင္နီဆီလင္လို့ေခၚတဲ့ေဆးေၾကာင့္